धरानको बेतिथि कहिल्यै हटेन ।(सम्पादकीय )
प्रकाशित मितिः बैशाख	29, 2076
995 पटक पढिएको
धरान सभ्य नगरीककोरुपमा हामी परिचित गराउन खोज्छौ । तर हुदा हुदा हामी आफै असभ्य भएर प्रस्तुत हुन्छौ । यसो भनिरहनुको मुख्य कुरा असभ्य भनेको के हो भन्ने प्रश्न उठने गर्दछ । धरानमा बेलाबेलामा यस्ता कार्यक्रमहरु हुने गर्दछन जुन धरानेको असभ्य परिचय दिने गर्दछ । धरानमा हामी भव्य पार्टी गर्ने भन्दै आफनै घर अगडीको सडक बन्द गरेर विवाह लगायतका कार्यक्रमहरु गर्ने गर्दछौ । यसबाट बाटोमा आवतजावत गर्नेहरुलाई ठुलो समस्या हुने गर्दछ भने अत्याआवश्यक सवारी साधनहरु हिडन नपाउदा ठुलो समस्या हुने गर्दछ । दमकल, एम्वुलेन्स लगायतका सवारी साधन निर्वाध संचालन हुन दिनुपर्छ । यसरी सडकनै बन्द गरेर कार्यक्रम गर्नु ठिक होईन । यस्ता गतिविधि गर्ने नगरबासीलाई धरान उपमहानगरपालिकाले सचेत गराउनुपर्ने हो । र गर्नु पनि पर्छ । तर पछिल्लो समय धरानको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने उदेश्यले धरान सडक उत्सव भईरहेको छ । यो उत्सव पनि धरानको अत्याआवश्यक दमकल दौडिने बाटोमा बाटोनै छेकेर सडक महोत्सव गर्नु कत्तिको ठिक ? धरानको पर्यटन प्रर्वद्धन यसो ग¥यो भने हुन्छ त ? आयोजकले यसबारेमा बेलैमा सचेतता अपनाउनुपर्छ । हिजो धरानका विभिन्न ठाउहरुमा बाटोनै छेकेर विवाह लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएकोमा फेरी धरानमा सडकनै बन्द गरेर सडक उत्सव गर्नु राम्रो होईन ।
धरान सडक उत्सव भईरहदा कमसेकम अत्याआवश्यक दमकल जस्तो सवारी साधन निर्वाधरुपमा संचालन हुन सक्ने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ । अहिले भईरहेको ठाउमा दमकल राखिने धरान उपमहानगरपालिकाको अगडीनै यसरी सडक उत्सव संचालन भईरहनुले फेरी पनि धरानको पर्यटनको नाममा हामी धराने आफैले असभ्यता प्रस्तुत गरीरहेकाछौ । विदेशका धेरै ठाउमा स्ट्रीट फेस्टीभल हुन्छन् । सडकमै मेला बजार लाग्ने गर्दछ । तर केही समयमा आफै त्यो ठाउ खाली गराईन्छ । तर धरानको सवालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । तीन दिनको नाममा हप्ता दिन सम्म सडक अवरोध हुनेगरेको छ । त्यसैले धरान सडक उत्सव आयोजकहरुले पनि सडकको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ । सडकनै बन्द गरेर यस्तो कार्यक्रम गर्नुको साटो कुनै खुल्ला स्थानमा त्यही नाम दिएर महोत्सव गर्न राम्रो हुनेछ ।
धरानको मुख्य सडक त्यसै पनि अव्यावस्थित पार्किङले लथालिङग भईरहेको अवस्थामा सडकनै कव्जा गरेर यस्तो उत्सव आयोजना गर्नुहुदैन । यदी त्यही ठाउमा कही आगलागिको घटना भयो र कार्यक्रम स्थल भित्रका घरमा विरामी परे भने के गर्ने ? यसबारेमा समयमै सोच विचार गरेर मात्रै यस्तो कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नुपर्छ । यसरी सडक अतिक्रमण गरेर कार्यक्रम आयोजना गर्नु धरानेहरुको असभ्य परिचय दिनुहो ।
त्यसैले धरान उपमहानगरपालिकाले पनि सडक कव्जा गर्ने कार्यक्रम गर्नमा समयमै विचार पुराउन जरुरी छ । भोली यस्तै कार्यक्रम अरुले पनि गर्ने भने के गर्ने ? यसबारेमा धरान उपमहानगरपालिकाले पनि बेलैमा सचेतता अपनाउनुपर्छ । सडक कव्जा गरेर कार्यक्रम गर्ने गलत तथा असभ्य कार्य तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ ।
धनकुटा ७ मा टोलटोल सम्म कांग्रेस
धरान, १७ साउन, धनकुटाको टोल टोल सम्म नेपाली कांग्रेसको सदस्यता वितरण गरी सवै टोलहरुमा टोल समिति गठन गरी नय�
सभामुखद्वारा इदउल अजहाकाे अवसरमा शुभकामनमा
श्रावण 17, 2077
धरान । १ नं. प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै इद उल अजहाको अवसरमा शुभक�
काँग्रेस केन्द्रीय महिला विभाग सचिवमा धरानकी लक्ष्मी खतिवडा
श्रावण 6, 2077
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय महिला विभागमा सच�
मोरङमा लागुऔषध सहित १ जना पक्राउ
हाँतातुङमा ट्याक्टर दुर्घटना १ जनाको मृत्यु ५ जना घाईते
प्रदेश १ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्तामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
मुलुक राजनीतिक दलालहरूको चक्रब्यूमा
‘नक्कली प्रहरी बनेर सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई धम्क्याउने र होटलमा सित्तै खाने पक्राउ’
‘कोरोना संक्रमित बढेपछि झापाका २ स्थानीय तहमा लकडाउन’
‘भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मन्त्रीको मृत्यु’
सभामुखको अगुवा गाडीका चालक प्रहरीमा कोरोना संक्रमण
सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश नेपाली सुरक्षा गार्ड कुटिएपछि, मलेसियन प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान!